Isitiya seHerb - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguVanessa
Igumbi elikhanyayo, elinomoya, elikumgangatho ophantsi, elinomgangatho omnye. Kukho ikhitshi elikhulu kunye neendawo zokuhlala ezitofotofo, kunye nepatio yabucala / indawo yegadi. Sime kakuhle ekutyeleleni iSilverstone, iAddington, iOxford, iBicester Village, iWaddesdon Manor, iStowe Gardens kunye neBletchley Park. Ikwalungele ukusebenza eMilton Keynes okanye eAylesbury kunye noololiwe abaya eLondon naseBirmingham. Le ndlu ivaliwe ukungena kunye neendawo zokupaka ezingaphandle kwendlela. Siyavuya ukuhlalisa izinja eziziphethe kakuhle.
Ikhitshi elikhulu nelanamhlanje elinezixhobo ezifanelekileyo. Indawo enkulu yokupaka ngaphandle kwendlela iyafumaneka kufutshane nefulethi. Indawo yasemaphandleni ezolileyo. Kukho indawo egqunyiweyo yepatio enetafile kunye nezitulo kunye negadi yabucala eneebhedi ezinyusiweyo ezineentyatyambo kunye nezityalo zemifuno.
4.84 · Izimvo eziyi-318
Ubumelwane buzolile kunye namasimi ajikeleze umhlaba. Zininzi iidolophu kunye nabakhenkethi abakhenkethi abakufutshane kubandakanya iWaddesdon Manor, iStowe Gardens, iSilverstone, iBletchley Park, iAddington Manor Equestrian Centre, iGreen Dragon Rare Breeds Farm, iMilton Keynes Waterside Theatres, kunye neClaydon House zonke zikufutshane. Indlela yeenyawo ekufutshane nefulethi.
Amaxesha okungena kwangethuba angacwangciswa uninzi lwexesha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Granborough